Texas Crew Productions မှ 'IRONMAN' စိန်ခေါ်မှုနှင့် Zylight F8 LED Fresnel နှင့်ရင်ဆိုင်ရသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » တက္ကဆက်လေယာဉ်အမှုထမ်း Productions Zylight F8 LED ကို Fresnel နှင့်အတူ '' IRONMAN '' စိန်ခေါ်မှုတွေ့ဆုံ
တက္ကဆက်လေယာဉ်အမှုထမ်း Productions Zylight F8 LED ကို Fresnel နှင့်အတူ '' IRONMAN '' စိန်ခေါ်မှုတွေ့ဆုံ
Los Angeles - ဓာတ်ပုံတယ်ရီ Stewart ရဲ့သူဟာ Emmy ဆုရဒါရိုက်တာအစောပိုင်း 1980s အတွက်, Austin, Texas ပြည်နယ်တက္ကဆက်လေယာဉ်အမှုထမ်း Productions တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သူ့ကုမ္ပဏီအတွက် Super Bowl ကမ္ဘာ့စီးရီး, NBA နောက်ဆုံးအနေနဲ့နှင့်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲအပါအဝင်အများအပြားအဓိကအားကစားဖြစ်ရပ်များ, ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။ မိမိအပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြိုက်ဆုံးကတော့ IRONMAN ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံ, Kailua-Kona, ဟာဝိုင်ယီအတွက်ပြီးခဲ့သည့်လကကျင်းပခဲ့နှင့်အပေါ်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ရှည်လျားသောအကွာအဝေးကြားတွင်ဖြစ်ပါသည် အား NBC နိုဝင်ဘာ 15 ပေါ်မှာ။
ဤသည် Stewart ရဲ့ 22nd ဖြောင့် IRONMAN ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာနေထွက်မှာစတင်သည်နှင့်သန်းခေါင်မှာအဆုံးသတ်မယ့်ပင်ပန်းကြမ်းတမ်းထုတ်လုပ်မှုနေ့ဖြစ်၏။ မှာနေဝင်ချိန်နှင့်အတူ - ထုတ်လုပ်မှုလျှောက်လုံးသဘာဝအလင်းအပြောင်းအလဲများ6ညနေပတ်လည်ညအချိန်သေနတ်ပစ်ခတ်မှု၏နာရီပေါင်းများစွာလိုအပ်သည်။ "ဒါဟာအဲဒါကိုကြီးမားတဲ့ footprint ကိုကျော်မယ့်တာရှည်မယ့်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်နေ့စိန်ခေါ်တစ်ကယ့်ကိုတက္ကဆက်လေယာဉ်အမှုထမ်း Productions ရဲ့" ဟုသူကရှင်းပြခဲ့သည် "နှင့်သင်သည်အမျိုးမျိုးသောစွမ်းရည် 2,000 အားကစားသမားများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ပါတယ်။ သင်သည်တစုံတခုကိုအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ "
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထုတ်လွှင့်မှုအတွက်တစ်ဦးက "ကမ္ဘာ့အစာကျွေးခြင်း" ကို standalone ထုတ်ကုန်တစ်ခုအမာခံအုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူထုတ်လုပ်ခဲ့သည် Sony က PDW-F800 ကင်မရာများ။ အတွက် အား NBC ထုတ်လွှင့်, သို့သော်, တက္ကဆက်လေယာဉ်အမှုထမ်းအနီရောင် Epic ပါဝင်သည်, Sony က F55s, Cannon EOS C300s နှင့်တစ်ဒါဇင် GoPro ကင်မရာတစ်ခုခင်းကျင်း။ တက္ကဆက်လေယာဉ်အမှုထမ်းပြန်အယ်ဒီတာများဟာ 90 မိနစ်အစီအစဉ်ကိုဖန်တီးဘယ်မှာ Austin, ရန်သူအပေါင်းတို့ကိုရိုက်ကူးဆောင်ခဲ့လေ၏။
ထိုအဖြစ်အပျက်စဉ်အတွင်းသမားတွေမကြာခဏအရေးယူရိုက်ကူးဖို့ပြိုင်ကားသမားများ၏ရှေ့မှောက်၌မောင်းနှင်။ ယခုနှစ်တွင် Stewart ကမိမိအသစ်ကို၏တဦးတည်းကိုအသုံးပြု Zylight F8 LED Fresnels တစ်ဦးပြောင်း၏နောက်ကျောထဲကရိုက်ကူးနေစဉ်။ အဆိုပါ F8 စံ 14 စွမ်းအားဖြင့်နိုင်ပါသည်။ Stewart ကအဆိုပါ IRONMAN သင်တန်းတစ်လျှောက်ကိုပိုမိုဝေးလံသောနေရာများ၌ရှိ၏အခါလမ်းမပေါ်တွင်အသုံးဝင်ခဲ့သည့် 4V ကင်မရာဘက်ထရီ။ "ငါတကယ်ဘက်ထရီချွတ် run နိုင်အချို့သောလာကြတယ်နှင့်အတူတစ်ဦးနဲ့ LED လိုချင်ပါ" ဟုသူကဆိုသည်။ "ဒါဟာကြီးမားတဲ့အချိန်ချွေတာဖြစ်ပါတယ်။ "
ပြိုင်ပွဲသင်တန်းတဘက်, Stewart ကလည်း IRONMAN ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံခြောက်ကြိမ်အနိုင်ရပါပြီနှစ်ဦးစလုံးအဘယ်သူကို၏, Mark အယ်လန်နှင့် Dave ဖြစ်သူ Scott နှင့်အတူ prerecorded တွေ့ဆုံမေးမြန်းသည်မိမိနှစ်ခု F8s, ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ "ကျနော်တို့ရှေ့ကိုအပြေးပြိုင်ပွဲနေ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်တာဗျူးနှင့်ပုံတူသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်သည့်အခါအဘယ်မှာရှိ Zylights တကယ်နေရာလေးကို လာ. ခဲ့သည်" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "ကျွန်မကသဘာဝမိုဃ်းလင်းတွေအများကြီးသုံးပြီးရိုက်ကူးဖို့ကြိုက်တယ်။ အဆိုပါ dimmable Zylight သင်ပြီးမြောက်တကယ်ကူညီပေးသည်။ "
မိုဃ်းလင်း (5600K) သို့မဟုတ်အဖြိုက်နက် (3200K) ဗားရှင်းအတွက်သာရရှိနိုင်သည့် F8 တစ်ခုတည်းအရိပ်ရိုးရာ Fresnel ရောင်ခြည် shaping ထိန်းသိမ်းထားရာရှစ်လက်မအရွယ် SCHOTT ဖန်မှန်ဘီလူး, ပါရှိပါတယ်။ င်း ကွမ်တမ် dot နည်းပညာတစ်ခုချိန်ညှိရောင်ခြည်ပျံ့နှံ့ (16-70 ဒီဂရီ) ဖြင့်တစ်ဦးထက်ပိုသောသန့်စင်ပြီးနှင့်မျှတသောသဘာဝအလျောက်အလင်း output ကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အစက်အပြောက်များနှင့်ရေလွှမ်းမိုးစစ်ဆင်ရေးများအတွက် system ကိုအာရုံစူးစိုက်မူပိုင်ခွင့်။ အဆိုပါ F8 လည်းစိန်ခေါ်မှုအခြေအနေများအတွက်အသုံးပြုရန်ရေယဉ် (IP54) ဖြစ်ပါသည်။
"ဒီ Zylight ရွေးချယ်မှုငါ့ key ကိုအလင်းဤသည်နေ့ရက်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ငါနှင့်အတူလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကသယ်, "Stewart ကဆက်လက်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်။ "ဒါဟာန်းကျင်ရွှေ့ဖို့အတော်လေးအလင်းနှင့်လွယ်ကူပါတယ်။ ဒါဟာငါတကယ်လိုချင်အင်္ဂါရပ်အားလုံးရှိပါတယ်။ "
အကြောင်း ZYLIGHT LLC သည်
2003 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Zylight LLC သည်ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အသိဉာဏ်နဲ့ LED အလင်းရောင်တူရိယာ၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ အချို့လည်း gels မပါဘဲချိန်ညှိအရောင်များကိုတစ်ရောင်စဉ်များကိုစဉ်က၎င်း၏လွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုအလင်းရောင်စနစ်တိုင်းမော်ဒယ်အပြည့်အဝချက်တွေကိုတောက်ပသောအဖြူရောင်အလင်းထုတ်လုပ်သည်။ အပြည့်အဝကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်နှင့် DMX ပေါင်းစည်းမှုပါဝင်သည်, နှင့် AC သို့မဟုတ် DC ကအာဏာကိုရှေးခယျြစရာမရရှိနိုင်ကြသည်။ အဆိုပါ Zylight State-Of-The-Art နဲ့ LED စနစ်ကအမှန်တကယ်စျေးကွက်အပေါ်အများဆုံးထူးခြားတဲ့နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အလင်းရောင် system ကိုယနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းထက်ပို 50 ကုန်သည်တွေနှင့်အတူ, Zylight သင့်ရဲ့အလုပ်ပိုမိုလွယ်ကူအောင်ကူညီပေးဖို့ဆန်းသစ် LED မီးအလင်းရောင်ဖြေရှင်းနည်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။ Bright- သန်းကပိုZylight။ ပိုပြီးအချိန်၌ထွက်ရှာမည် www.zylight.com.
TVU ကွန်ယက်များ၏လူမှုထုတ်လုပ်မှုအတွက်ကဏ္ New သစ်သည် Real-time Virtual Communication နှင့်ထုတ်လုပ်မှု Crew နှင့် Talent အကြားအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ - မေလ 29, 2020
အသံလွှင်း F8 Fresnel Fresnels အလင်းရောင် အလင်းရောင်ကရိယာ post ကိုထုတ်လုပ်မှု အားကစားထုတ်လုပ်မှု Zylight 2014-11-25
ယခင်: အဆင့်မြင့်စနစ်များ Group မှအရောင်းဝန်ထမ်းမှ Ed က Chen ကထည့်ပေးသည်
နောက်တစ်ခု: သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ရက်ညှိနှိုင်းရေးအိုင်စီတီစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကာဗွန် Footprint နေရပ်လိပ်စာမှ Consortium စည်းရုံး